Nnwom 45:1-9 NA-TWI | Biblica
Nnwom 45:1-9 NA-TWI
Nsɛm a ɛyɛ dɛ hyɛ m’adwene ma bere a merehyehyɛ saa dwom yi ama ɔhene no. Ɛte sɛ ɔkyerɛwfo pa kyerɛwdua, anwensɛm ayɛ pɛ me tɛkrɛma so.
W’ahoɔfɛ twa mmarima nyinaa mu. Wo kasa yɛ dɛ. Onyankopɔn ahyira wo daa. Fa wo nkrante, ɔhene kɛse; w’anim yɛ nyam na woyɛ otumfoɔ. Kɔ w’anim tumi ne nkonimdi so fa bɔ nokware ne papa ho ban. W’ahoɔden bɛma woadi nkonim akɛse! Wo bɛmma ano yɛ nnam; ɛwowɔ w’atamfo koma mu; aman hwe ase wɔ wo nan ase. Ahemman a Onyankopɔn de ama wo no bɛtena hɔ daa daa. Wode nokware di wo nkurɔfo so; wodɔ ade trenee na wukyi ade bɔne. Ɛno nti na Onyankopɔn, wo Nyankopɔn ayi wo de ahotɔ ahyira wo asen ɔhene biara no.
Kurobow ne pɛperɛ hua wɔ wo ntade mu. Nnwomhyehyɛfo gye w’ani wɔ ahemfi a wɔde asonse asiesie hɔ no mu. Ahemfo mmabea na wɔka mmea a wɔwɔ wo fi ho, na w’ahengua nifa so na ɔhemmea gyina a ɔhyɛ sikakɔkɔɔ a ɛyɛ fɛ yiye agude.
Read More of Nnwom 45